नेकपाको सात वटै प्रदेश कमिटीमा को–को परे ? (नामसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेकपाको सात वटै प्रदेश कमिटीमा को–को परे ? (नामसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले प्रदेश सदस्यहरुको नामावली टुंङग्याएको छ । नेकपाले मंसिर १२ गते नै कमिटीलाई पूर्णता दिएको दाबी गरेको छ । तर नामावली भने अाज मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । स्रोतकाअनुसार पार्टीका दुई अध्यक्षको राय लिएर महासचिव विष्णु पौडेलले केही नाम थपघट गरेर नामावली अाज प्रकाशित गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा २०७ जनाको कमिटी रहनेछ । जसमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट ८५ र तत्कालिन एमालेका १२२ जना रहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा २१५ सदस्यीय कमिटी रहनेछ । जसमा तत्कालिन एमालेका १०६ र तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट १०६ र एकताबाट आएका ३ जना रहेका छन् ।
प्रदेश ३ मा २१७ सदस्यीय हुनेछ । जसमा तत्कालिन एमालेका ११६ र तत्कालिन माओवादीका १०१ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेश १८७ सदस्यीय बनेको छ । जसमा तत्कालिन एमालेका १ ०२ माओवादीका ८५ जना रहेका छन् । प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यी हुनेछ । जसमा तत्कालिन एमालेका १०६ माओवादीका ९७ जना रहेका छन् ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश १७५ सदस्यीय हुनेछ । जसमा तत्कालिन एमालेका ८७, माओवादीका ८८ जना रहेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश भने १८३ सदस्यी हुनेछ । जसमा एमालेका १ सय र माओवादीका ८३ जना प्रदेश कमिटीमा अटाएका छन् ।
मंसिर १७ गते, २०७५ - १७:२० मा प्रकाशित